Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguFederica
Indlu enamagumbi amabini eDuplex, ekumgangatho wesibini, ngaphakathi kweSmeralda Residence
I-Apartment ihlelwe ngokwamanqanaba amabini:
- Kwindawo yokuqala ephezulu sifumana igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela kunye ne-balcony, igumbi lokuhlambela kunye negumbi
-Kumgangatho ophantsi sifumana indawo yokuhlala / igumbi lokutyela, ikhitshi, igumbi eliluncedo kunye ne-terrace enezixhobo.
Izixhobo: ITV, umatshini wokuhlamba umoya, umatshini wokuhlamba, ifriji, isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, iayini kunye nebhodi yoku-ayina, i-microwave.
Isikhululo seenqwelomoya sase-Olbia simalunga nemizuzu engama-20 ukusuka kwiNdawo yokuhlala, enokufikelelwa ngeteksi, imoto okanye ibhasi.
Indawo yokuhlala ijikelezwe ziigadi ezigcinwe kakuhle, ezikumanyathelo ambalwa ukusuka kwichweba labakhenkethi kunye neziko lePorto Rotondo.
Idama lokuqubha (elivulwe ukusuka nge-15 kaJuni ukuya nge-30 kaSeptemba kunye nokwahluka okunokwenzeka ngenxa ye-COVID), yeyona ndawo ifanelekileyo yokonwabela ukuphumla okuhle, ecaleni kwayo uya kufumana ukufikelela ngokuthe ngqo kwizibuko labakhenkethi ngebheji esiya kukunika yona. .
Unokufikelela ngokulula kumbindi wePorto Rotondo kunye neelwandle zethu ezintle, phakathi kwazo ezidumileyo "Ira beach" kunye ne "I Sassi". Zonke iilwandle zasePorto Rotondo zinokufikelelwa ngenkonzo ye-shuttle yamahhala enikezelwa yi-Consortium yasePorto Rotondo.
Uya kufumana ngaphantsi kwe-50m zonke iinkonzo eziluncedo ezifana nevenkile enkulu, ivenkile yecuba, ibhanki, iposi, kunye nebhari.
Inkonzo yokudlulisa ukusuka kunye neSikhululo seenqwelomoya (ngesicelo)
Inkonzo yokugcina umntwana (ngesicelo).
Inkonzo yehotele, inkonzo yomgcini womntwana yinkonzo eyongezelelweyo, xa uceliwe
Ungarenta iitowu zaselwandle, ii-sceets ezininzi, iithoyi zaselwandle kunye nezinye.. Apha.
Kuyenzeka ukuba urente iitawuli zaselwandle kunye / okanye ichibi / uhambo lweencwadi emhlabeni kunye nolwandle, ukhenketho olukhokelwayo / Ukurenta iibhayisekile / Iinkonzo zefoto ezenziwe ngencwadi
Ukuba ufuna i-wifi kuya kufuneka uyibhale ngaphambi kokufika kwakho njengoko iyipokethi ye-wifi kwaye ingeyiyo i-wifi esisigxina, ukuze ukwazi ukuyigcwalisa phambi kokufika kwakho.
Indawo yokuhlala iSmeralda inequla elimangalisayo lokuqubha langaphandle labantu abadala nabantwana, igadi eluhlaza, kunye namagumbi anebalcony okanye ipatio kunye nomabonwakude.
Ecaleni kwesikhululo sebhasi yoluntu kunye nenkonzo ye-shuttle ye-Mare Mare yamahhala enikezelwa yi-Porto Rotondo consortium. (Inkonzo yoqhagamshelo kwiilwandle eziphambili, esebenzayo ukusuka kwi-6 Juni ukuya kwi-15 Septemba ngaphakathi kweSithili sasePortorotondo).
Zonke iinkonzo eziluncedo (ivenkile enkulu, iibhari, iindawo zokutyela, iposi, ibhanki, njl.njl.) ziphakathi kweemitha ezili-150.
Ulwandle olukufutshane lukude ngeemitha ezingama-800 kuphela (Spiaggia Ira), ngakumbi lonatane imalunga ne-2km kude.
Ndiya kuhlala ndifumaneka ngefowuni (nango whatsup), mna nabasebenzi bam sihlala singaphakathi kwiNdawo yokuHlala ukuze siqinisekise ngenkonzo eqhubekayo nekhawulezayo ukuba iluncedo kwaye iyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Porto Rotondo